PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: August 2014
သြဂုတ် - ၃၁ - ၂၀၁၄
ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တွင်၌ ယနေ့ဆက်လက်ကျင်းပသည့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ပထမအကြိမ်ညီလာခံတွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU သည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ယနေ့နှုတ်ထွက်သွားသည်.
UNFC ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မူဝါဒများကို မကြိုက်သဖြင့် ယနေ့နံနက် အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန် ဒေသစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီခန့်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှုတ်ထွက်ကာ အစည်းအဝေးခန်းမမှ KNU ကိုယ်စားလှယ်များ ထွက်ခွာသွားသည်ဟု ညီလာခံတက်ရောက်နေသည့် ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ကရင်အမျိုးသား - မီဒီယာ - ကိုပြောသည်။
ယခုကျင်းပနေသည့် UNFC ညီလာခံကို ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တွင် စတင်ကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပြီး ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိသည်။
UNFC ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
UNFCနှင့် ပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘုံသဘောတူညီမှု ချမှတ်မည်
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) နှင့် ပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစု အဖွဲ့အစည်း ငါးဖွဲ့တို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် သြဂုတ် ၂၉ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေများကို သုံးသပ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘုံသဘောတူညီမှု ချမှတ်မည်ဟု UNFC၏ မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့(UNA)၏ သဘာပတိ အဖွဲ့ဝင် ဦးအေးသာအောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ UNFC မှာ မပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ အနေနဲ့ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အပြောင်းအလဲအတွက် အားလုံးဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မယ်။ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်တခု ချမှတ်မယ်။ တကယ်တော့ လက်တွဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရမည့် ကဏ္ဍတွေမှာပါ အကျိုးရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
UNFC နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ရှစ်လေးလုံးအထောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၊ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့နှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့(UNA)မှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၁ဝဝကျော်က အစိုးရနှင့် NCCTတို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုအပေါ် အကြံပြုရန် UNFC၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး သြဂုတ်၂၉နှင့် ၃ဝ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။
“ပြည်တွင်းက အင်အားစုတွေအနေနဲ့ လက်ရှိ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရော အပစ်ရပ်ထားတဲ့ လူတွေရော၊ ပါတီတွေရော အားလုံးကြားထဲမှာ တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း အဲဒါကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ နားလည်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ ရပ်တည်ချက်တစ်ခုခု ထွက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်”ဟု ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကိုကိုကြီးက ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး အာမခံချက်ရှိရန်အတွက် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်၍ အရေးကြီးသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဖြစ်သည်ဟု ဦးကိုကိုကြီးက ဆက်ပြောသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်က နိုင်ငံသားတွေ အားလုံးပါဝင်လာမှ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးက အာမခံချက်ရှိမယ်၊ ပထမအဆင့်မှာက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကြား၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ စလုပ်တာပေါ့”ဟု ဦးကိုကိုကြီးက ပြောသည်။
သြဂုတ်လ ၂၉ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် UNFC ခေါင်းဆောင်များ၏ ညီလာခံ ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းမှ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်။ UNFC၏ ညီလာခံကို သြဂုတ် ၂၅ရက်မှ စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးမှု မပြီးပြတ်သေး၍ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြီးမှသာ ဆက်လက်ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ထူးခြးတဲ့ ဂျပန်တို့အလှူ "ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ ရင်ဘတ်ကြီးကိုကိုင်ကြစို့ ".....
ပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့Shinjaku ရပ်ကွက်မှာ Stop!AIDS ဆိုတဲ့ အလှူငွေပွဲလေးတစ်ပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေတုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အလှူငွေပွဲလေးဆိုပေမဲ့ ကမ္ဘာသိဖြစ်ရလောက်အောင် သူရဲ့လှူဒါန်းမှုပုံစံက ထူးခြားပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ နာမည်ကြီး အပြာမင်းသမီးတွေက ဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီတွေကို ပုံပါအတိုင်း မပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကိုလာရောက်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ အလှူငွေထည့်ဝင်ပြီး ကိုင်တွယ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ၁၈ နှစ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပြီး မကိုင်ခင် လက်ကို ပိုးသတ်ရပါမယ်။ အလှူငွေဟာ ဂျပန်ယန်း ၁၀၀၀ ကျော်အထက် ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လှူဒါန်းသူအမျိူးသားဟာ ထပ်ကာထပ်ကာလှူဒါန်းခွင့်လည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးအားလုံးကို ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ AIDS ရောဂါ ကုသကာကွယ်ရေးအတွက် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲကို ဂျပန်ရုပ်သံဌာနတွေက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီး အခြားအစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“ကျွန်မရင်သားတွေက လူအဖွဲ့အစည်းကို အကူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တစ်ခုမှမတွေးခဲ့ဖူးဘူး” လို့ အပြာစတားတစ်ဦးဖြစ်သူ Rina Serina က Tokyo Sport ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 9:42 AM0comments
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၂ ဖွဲ့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ “ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ- UNFC” ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံကို ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ကစပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျင်းပနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းထောက် ကိုအောင်မိုးမြင့်က သတင်းပေးပို့ထား ပါတယ်။
video by - rfa.org/
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုးမိတ် မြို့နယ်၊ မန်ရှီကျေးရွာမှ အသက် (၃၈) နှစ် ရှိ် ဦးအိုက်ဇက်အား မြန်မာအစိုးရ တပ်၊ တပ်မ (၇၇) မှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သော သြဂုတ်လ (၁ရ) ရက်နေ့ က အစိုးရစစ်ကြောင်း မန်ရှီရွာထဲသို့ ဝင်လာပြီး ဦးအိုက်ဇက်ကို ဖမ်းဆီး တုပ်နှောင်ကာ အစိုးရ စစ်တပ် ၏ စစ်ဗိုလ် ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင် စေပြီး စစ်ကြောင်း ရှေ့ဆုံးမှ မိုင်းဗုံး အကာ အကွယ် အဖြစ်လျှောက် စေခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်း ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ရန် ငြင်းဆန်သော ကြောင့်ပြင်းထန် စွာရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း၊ သြဂုတ်လ (၁၇-၂၁) ရက်နေ့ထိ (၄) ရက် ဆက်တိုက် ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း နှိပ်စက် ဒဏ်ရာများ ပြင်းထန် လွန်း၍ လမ်းမ လျှောက်နိုင် တော့သော အခါမှ လမ်းခုလပ်တွင် ပစ်ထားခဲ့ရာ တွေ့ရှိသောရွာသားများ ရွာသိ်ု့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာကာဆေးကုသပေးခဲ့ကြရကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ဦးအိုက်ဇက်သည် မိမိ ရွာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း အစိုးရတပ် မှ နှိပ်စက်ထားသော ဒဏ်ရာများကြောင့် မိမိ နေအိမ်တွင် ဆေးဝါးကုသနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက် UPWC နဲ့ NCCT တို့ ၁၅-၁၇ သုံးရက်တာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ အစိုးရဖက်က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ သဘောတူတယ်၊ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင် ၂၄ နာရီအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်−စတဲ့ရလဒ်
တအာင်းဒေသအတွင်း တအာင်းတပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ပြင်းထန်
၂၆ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
တအာင်းဒေသ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ မန်မိုင်ကျေးရွာအနီးတွင် ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၀၃း၀၀ နာရီ အချိန်မှ ၀၃း၃၀ နာရီအချိန်ထိ တအာင်းတပ်မတော် တပ်မဟာ(၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၇၁၇) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ(၇၇) နှစ်ဘက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။
နမ္မတူမြို့နယ်၊ နမ္မတူ-မန်တုံ ကားလမ်းမပေါ် ဘော်တွင်းအနီးတွင်လည်း ၀၉း၃၀ နာရီမှ ၁၀း၂၀ နာရီ အချိန်ထိ တအာင်းတပ်မတော် အမှတ်(၅) ဗျူဟာကွပ်ကဲမှုလက်အောက်ရှိ တပ်ရင်း (၇၇၃/၈၈၅) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ(၇၇)တို့ ဒုတိယအကြိမ် တိုက်ပွဲ ထပ်မံ ဖြစ်ပွါးပြန်သည်။
သြဂုတ် ၂၆ ရက် တစ်ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲ (၂) ကြိမ်ဖြစ်ပွါးခြင်း ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲတွင် တအာင်းတပ်မတော် ဖက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမရှိပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဖက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမသိရှိရသေးပါ။
တိုက်ပွဲ အသေးစိတ်သတင်းအား ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရတနာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက တိုတယ်ကုမ္ပဏီက လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ် ထုတ်လုပ်နေသည့် ကုပဗေ သန်း ၈၀၀
သဘာဝဘေးအန္တာရယ်နှင့် ငလျင်ဒဏ်များ" ကြုံလာလျှင် မည်သည့်နေရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခိုလှုံရမည့်နေရာကို စုဝေးပြီး လိုက်လံ ပြသပေးမည့်အစီအစဉ်
TOSHIMA-KU မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် "သဘာဝဘေးအန္တာရယ်နှင့် ငလျင်ဒဏ်များ" ကြုံလာလျှင် မည်သည့်နေရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခိုလှုံရမည့်နေရာကို စုဝေးပြီး လိုက်လံ ပြသပေးမည့်အစီအစဉ်ကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း မည်သူမဆို လိုက်ပါနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
စီမံကိန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ငွေကျပ်ဘီလျံ ၇ဝဝဝ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဘီလျံနဲ့ သုံးနှစ်အတွင်း ရာခိုင်နှုန်း ၇ဝ ပြီးအောင် လုပ်မယ်။ ကုမ္ပဏီက အဆင့်မြင့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ ၂ဝဝဝဝ၊ မိဘမဲ့ကလေးဦးရေ ၂ဝဝဝ အတွက် အဆင့်မြင့်ကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ ဘိုးဘွား ၂ဝဝဝ ဆံ့ အဆင့်မြင့်ရိပ်သာ တစ်ခု၊ ခြောက်လမ်းသွား မြစ်ကူးတံတား ငါးစင်းကို နိုင်ငံတော်ကို ပြန်လှူ မယ်လို့ ဦးလှမြင့်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်းက လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူတွေ၊ ကျေးရွာငယ်တွေမှာ
Posted by PNSjapan at 12:59 PM0comments
TNLA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ ယနေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ဟုဆို
ရှမ်းပြည်နယ် ကျောက်မဲမြို့နယ် နမ့်ခွန်ကျေးရွာအနီး ပလောင်(တအာင်း) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(TNLA)နှင့် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်တို့အ ကြား သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်က တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု TNLA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ မိုင်းအိုက်ကျော်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
TNLA တပ်မဟာ ၂ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၇၁၇ နှင့် အစိုးရ၏ တပ်မ ၇၇ တပ်ဖွဲ့များ ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျောက်မဲမြို့နယ် နမ့်ခွန်ရွာအနီးမှာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က နယ်မြေစိုးမိုးရေး ခရီးထွက်နေတာ။ အဲဒီမှာ တပ်မ ၇၇ က ကျွန်တော်တို့ ရှိတဲ့ဘက်မှာ လိုက်တိုက် တာ။လမ်းခုလတ်မှာ တွေ့ပြီးတော့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်တာ”ဟု ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များအကြား တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေချိန်အတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု မရှိခဲ့ဟု သူကဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်ကလည်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ကောင်းဝိုင်းကျေးရွာနှင့် မန်စပ်ကျေးရွာအကြား TNLA ၏ တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၁၁၂ နှင့် အစိုးရ တပ်မ ၈၈ တပ်ဖွဲ့တို့
အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာတစ်ခုပေးရလျှင် တောင်ယာစပါး စိုက်ပျိုးမည်ဆိုလျှင် ပထမဦးစွာ မိမိရွေးချယ်ထားသည့် တောင်စောင်း ပေါ်ရှိ သစ်ပင်ကြီးငယ်များကို ခုတ်ထွင်ပစ်ရမည်။ ယင်းနောက် အဆိုပါ ခုတ်ထွင်ထားသည့် သစ်ပင်များကို မီးရှို့မည်၊ “ကျွန်းခွေ” ရမည်။ ယင်းနောက်မှ စပါးစေ့ချ၍ စိုက်ပျိုးနိုင်မည်။ ယင်းသို့ မပြုလုပ်ဘဲ တောင်ယာစပါးစိုက်၍ မရနိုင်ပါ။ စိုက်လျှင်လည်း စပါး ပင်များ ချိနဲ့
Posted by PNSjapan at 11:14 AM0comments
ဖြေ။ ။ အခုက အန်ကယ်တို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့အခိုက်မှာ အန်ကယ်တို့ဘက်က ဆွေးနွေးရမယ့်အချက်ကို အစိုးရဘက်က လက်ခံ ထား ပါတယ်။ စာချုပ်ထဲမှာ အခန်းတိုင်းလိုလိုက အသေးစိတ်ဆွေးနွေးရတယ်။ အခုလိုအခြေအနေအထိဖြစ်အောင်တက်လှမ်းဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေဘက်က ပြောနေတာကိုလည်း သိပါတယ်။ စိတ်ရှည်ပေးစေချင်တယ်။ အခုချိန်မှာသိပ်ပြီးခက်ခဲ တာ တော့
အစိုးရတပ်မတော် တပ်မ(၈၈)မှ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရွာသား (၁) ဦး သေဆုံးပြီး (၂) ဦးမှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခြင်း
၁၈ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ကောင်းဝိုင်းကျေးရွာနှင့် မန်စပ်ကျေးရွာကြားတွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ် တပ်မ (၈၈)နှင့် တအာင်းတပ်မတော် တပ်မဟာ (၁) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၁၁၂) တို့သည် နံနက် ၉း ၄၅မှ ၁၀း ၀၀ နာရီ အထိ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အွမ်လောအုပ်စု မန်ကောင်းကျေးရွာနေ(ဂေါင်းတ၀ါး) ရွာသား (၂)ဦးနှင့် ဟိုနားကျေးရွာနေ ရွာသားတဦးတို့မှ လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီး တစ်ဦးမှာ ဤနေ့တွင် နမ့်ခမ်းဆေးရုံသို့ သေဆုံးခြင်းနှင့် နောက်ထပ် (၂)ဦးမှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာရရှိသဖြင့် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရသည်။
အွယ်လောအုပ်စု မန်ကောင်းကျေးရွာနေ ရွာသားနှစ်ဦးသည် နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်သို့ အလည်သွားသည့်အခါ မန်ကောင်းကျေးရွာ အဆင်းလမ်းတွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ ပစ်လိုက်သည့် လက်နက်ကြီးကြောင့် မိုင်းညီနိုင်ဇား အသက် (၂၂)နှစ် နှင့် မိုင်းယိုင်ထွန်းသန်း အသက် (၂၃)နှစ်တို့အား ထိမှန်ခဲ့ပါသည်။ လက်နက်ကြီး ထိမှန်မှုကြောင့် အစိုးရတပ်ရင်းမှာ သူတို့နှစ်ဦးကို တအာင်းစစ်တပ်ထင်ကာ ဖမ်းဆီး လက်ထိပ်ခတ်ထားပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းပါသည်။ မိုင်းညီနိုင်ဇားသည် နမ့်ခမ်းဆေးရုံသို့ရောက်သည့်အခါတွင် သေဆုံးပြီး မိုင်းယိုင်ထွန်းသန်းသည် ဘယ်ဖက်ခေါင်း၊ ၀ဲပျံမျက်လုံး၊ ဗိုက်တည့်တည့်၊ ဘယ်ဖက်ပေါင်စသည့်တို့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာဖြင့် ထိမှန်ထားသည်။
‘’ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က မြို့ကို သွားမလို့ ဆင်းလာတယ်။ နိုင်ဇားက ဆိုင်ကယ်မောင်းတယ်။ ကျနော်က နောက်ကနေ လိုက်စီးတယ်။ အစိုးရ စစ်တပ်ပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးကြောင့် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကို ထိတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လဲ တကိုယ်လုံး သွေးတွေနဲ့၊ ဗမာစစ်တပ်က ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကို မြင်တယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကို တအာင်းတပ်မတော်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီး လက်ထိပ်ခတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကို စစ်ဆေးတယ်။ ကျနော်တို့
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အရေး ကြီးသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အ ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါ ဝင်၍ မကြာမီလက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့် ကြောင်း UPWC ဒုဥက္ကဋ္ဌ
Posted by PNSjapan at 9:19 AM0comments
သယံဇာတကြွယ်ဝပြီး တက္ကသိုလ်က နှစ်စဉ်သောင်းချီပြီး ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေရှိနေတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ လမ်းဘေးဈေးရောင်းပြီး ၀မ်းစာကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာစားနေရတဲ့ ဒီလို လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ဘာလို့
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါတီအနေနဲ့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံတကာ လက်ခံမှု အခြေအနေအရကို ပုဂ်္ဂိုလ်ရေးအရ ဖိတ်ကြားဖို့ လိုပါတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အချိန်မှာ သူက အသိသက်သေအဖြစ်နဲ့
ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ UNFC ကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရန်ကုန်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေကြသောညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖွဲ့ (UNFC ) နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် အမှတ် ၅၄ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင် ယမန်နေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ညနေ ပိုင်းက ဆွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါတယ်။
မနေ့က ညနေ ၄ နာရီခွဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ကို UNFC ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်၊ ဦးနိုင်ဟံသာ၊ ဦးခွန်ဥက္ကာနှင့် ဦးထွန်ဇော်တို့ ၄ ဦးဟာ ရောက်ရှိ လာကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိပ်ကို မသိရသေးပေမယ့် လက်ရှိ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေူး ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ နီးစပ် သူတွေက ဆိုပါတယ်။
တအာင်းတပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား မြန်မာ့တပ်မတော် (၁၀) ဦး ထက်မနည်း ကျဆုံး ဒဏ်ရာရ
၁၈ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
တအာင်းဒေသ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ကောင်းဝိုင်းကျေးရွာနှင့် မန်စပ်ကျေးရွာကြားတွင် ယနေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၀၉း၄၅ နာရီ အချိန်မှ ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်ထိ တအာင်းတပ်မတော် တပ်မဟာ(၁) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၁၁၂)၊ နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်မ(၈၈) တို့ နှစ်ဘက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲတွင် တအာင်းတပ်မတော် ဖက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမရှိပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ (၁၀) ဦး ထက်မနည်း ကျဆုံး ဒဏ်ရာရသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် UPWC ၊ NCCT နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ဆုံပွဲ မြင်ကွင်းများ ။
( ၁၈-၈-၂၀၁၄) ရက်
Photos by MPC
Posted by PNSjapan at 8:39 PM0comments
“ဒီအစည်းအဝေးမှာ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးက ကျန်ခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို တော်တော်များများ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အချက်တချို့ပဲ အနည်းငယ်ကျန်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကိုလည်း လာမယ့်စက်တင်ဘာလ လဆန်းမှာပြုလုပ်မယ့် အစည်းအဝေးမှာ ကျနော်တို့အားလုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်နေပါတယ်။ အကယ်၍သာ အဲဒီမှာ ဆုံးဖြတ်နိုင် ရင် တော့ လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့် ရက်ကိုလည်း သတ်မှတ်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု UPWC မှ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး
Posted by PNSjapan at 8:30 PM0comments
အပစ်ရပ်ခိုင်မာဖို့ စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီများ ဖွဲ့ရမည်ဟု NCCT ခေါင်းဆောင်ပြော
တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် နှစ်ဖက် တပ်များ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် စောင့်ကြည့်ရမည့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဟု အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ( NCCT)မှ ပထမ ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
“ တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ နယ်မြေထိစပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်အောင် စောင့်ထိန်းရမယ့် စည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ဖို့ လိုတယ်၊ ဒီ့အပြင် စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာဖို့ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ကော်မတီ ဖွဲ့ရမယ်၊ဒါမှ အပစ်ရပ် ခိုင်မာမယ်" ဟု မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ တိုက်ပွဲများကြောင့် အပစ်ရပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် ယုံကြည်မှု ကျဆင်းစေနိုင်သည်ဟု နိုင်ဟံသာက မှတ်ချက်ပြုသည်။
အပစ်ရပ်သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် ကျင်းပမည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်နယ် အလိုက် စောင့်သည့် တပ်များ ထားရှိရန် လို/မလို ၊ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပေါင်စည်းသည့် စစ်ရေးခေါင်းဆောင်ပါဝင်ရန် လို /မလို စသည်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
အစိုးရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ အထူးအကြံပေး ဦးလှမောင်ရွှေက “ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်သွားဖို့ လိုတယ်၊ အဲ့မတိုင်ခင် ၁၀၀ ရာနှုန်း စံနှုန်းပြည့်တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ နှစ်ဖက် ညှိပြီးယုံကြည်မှုနဲ့ သွားရမယ်” ဟု ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသအချို့တွင် ပဏာမ အပစ်ရပ်သဘောတူညီမှုများ ရှိသော်လည်း တိုက်ပွဲများ ထိတွေ့မှု ဖြစ်နေသည်မှာ တပ်နေရာ ချထားမှုများ မရှိခြင်းကြောင့် ဟု ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ရပ် သဘောတူညီ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်တွင် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
အပစ်ရပ်မူကြမ်း ၁၀ ချက်သာ ဆွေးနွေးရန် လိုတော့သည်
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ(UPWC)နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT)တို့ ဆွေးနွေးနေသည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးမူကြမ်းတွင် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းရန် အချက် ၁၀ ချက်သာ ကျန်ရှိတော့သည်ဟု သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးတွင် နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များက မီဒီယာများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
NCCT မှ ဒုတိယခေါင်းဆောင် စောကွယ်ထူးဝင်းက “အချက်အကုန်လုံး သဘောတူညီမှု ရရှိနေပြီလို့လည်း ပြောနိုင်တယ်၊ အပစ်ရပ်မူကြမ်းမှာ ထည့်ဖို့ မလိုအပ်တဲ့ အချို့အချက်တွေကိုတော့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့ပြီး
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး အခြေခံမူ အစိုးရသဘောတူပြီ
တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ အခြေခံမူကို အစိုးရဘက်က သဘော တူလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ပထမနေ့အဖြစ် ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ (ယူပီဒဗလျူစီ)နဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (အန်စီစီတီ) ရဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ်အတွက် ဒီနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ သဘောတူလိုက်တာပါ။
အန်စီစီတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး အခြေခံမူက အချက်ကို အစိုးရဘက်က လက်ခံခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အဓိကအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က အရေးကြီးဆုံးအချက်လို့ ခံယူထားတဲ့ အမျိုးသားတန်းတူရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ဖို့ အစိုးရဘက် လက်ခံလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် လုံးဝပြေလည်သွားပြီဆိုတဲ့ အဆင့်တော့ မရောက်သေးဘူး။ အခုမှ စပြီးဆွေးနွေးတာကတော့ အခန်း ၁ နဲ့ ၂ လောက်ပဲ ရောက်ပါသေးတယ်။”
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာက တာဝန်ရှိသူ ဦးလှမောင်ရွှေက “တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က တင်တဲ့ အဆိုပြုတဲ့အထဲမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုလို့ အဆိုပြုတယ်။ ကျနော်တို့ ယူပီဒဗလျူစီဘက်က အဆိုပြုတာကတော့ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီ ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဆောင်ရွက်ရန်ဟာကို ပြန်အဆိုပြုတာ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က လက်ခံတဲ့ အတွက် အဲဒီအချက်က ပြီးသွားပြီပေ့ါဗျာ။ အဲဒါကတော့ အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ဟာတွေမှာလည်း အားလုံးနီးပါး အဆင်ပြေသွားပါတယ်” လို့
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက “အခြေခံ အချက်အလက်တွေအနေနဲ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ ဒီအချက်ဟာ အရေးကြီးပြီး အဓိကအကျဆုံး ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမယ့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမူနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေး ဒီအချက်ဟာလည်း ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ မရှိမဖြစ်
လက်ရှိအပြောင်းအလဲ ရန်ကုန်မြို့ခံတွေရဲ့ အမြင်အင်တာဗျူး
Post by Zaw Hlaing.
တနေ့ က ဂျပန်တီဗီ ချယ်နယ် ၄ မှာလာသွားတာလေးပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရနေပြီလား အပြောင်းအလဲကို ရန်ကုန်မြို့ခံတွေအမြင်ကိုဗျူးထားတာပါ တွေ့ ရာသူဗျူးထားတာထင်ပါတယ် အရမ်းကောင်းပါတယ် နောက် ကျနော့်ကိုမင်းက ဂျပန်ကအကူအညီတွေပေးတယ်ပေးတယ် သတင်းတွေပဲတင်နေတယ် အဲဒါတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲမေးကြ သူတွေအတွက်ပါ
စီလီကွန်နဲ့ တကယ့် လူ့အသားအရေလို ဖြစ်အောင် Love Doll တွေကို အခုနောက်ပိုင်းတီထွင်ဆန်းသစ် ခဲ့ကြပါ တယ်။ Love Doll တွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေကလည်း လူသားတွေကို အလွယ်တကူ ကွေးနိုင် ဆန့်
တောင်သူများအား သေနတ်ဖြင့် အကြမ်းဖက်ရန် ပစ်ခတ်မိန့်ပေးသူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးဒေသ၊ ညောင်ဝန်းရာမှ တောင်သူများအား အကြမ်းဖက်သမား ရဲများသည် ခရိုနီမြေသိမ်းသမားတို့၏ အလိုကျအတိုင်း၊ မည်သည့် တရားရုံးရုံးခွင့်ပြုချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာမှု၊ ရယူမှုမရှိပဲ ယနေ့မနက် ၁၀း၃၀ မိနစ်တွင် တောင်သူများအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်၊ ရဲအင်အား၂၀၀ ကျော် ပါဝင်သည်၊၊
တောင်သူ ဒေါ်စန်းကြည်နု သေနတ်ထိမှန်၊ ရွာသားခုနှစ်ဦး အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခံရသည်၊အထက်ပါ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်မှုအား အနီးကပ်၍ဖြစ်စဉ် နေရာရှိ ပစ်ခတ်မိန့်ပေးသူသည်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှုး၊အောင်စိုး(ကိုပိုင်နံပါတ်-၆၈၃၄၂)ဖြစ်သည်၊၊ ပစ်ခတ်သူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ အောက်ခြေ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး၊ တိကျသော အရေးယူမှုများနှင့် အတူ ၁၄၊၅၊၂၀၁၄ သုခိတ္တာရုံ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ လူထုနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သဘောတူညီချက်များအား၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ဒုရဲမှုးကြီး၊ မြင့်ဦး(ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်၁၇၆၃)မှ တာဝန်ခံဆောင်ရွက် အရေးယူပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုရဲမှုးကြီးမြင့်ဦးမှ လူထုရှေ့ မှောက်၌ ကတိပြု လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်၊၊ ဒေသခံများမှယ ခုအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့သော ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအား နောက်ကွယ်မှ အဆင့်ဆင့်ညွန်ကြားခဲ့သည်၊အကြမ်းဖက် အာဏာပိုင်များအား အရေးယူဖော်ထုတ်ရန် တရားစွဲရေး လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဒုရဲမှုးကြီးအား ပြောကြားခဲသည်၊၊
တအာင်းတပ် TNLA နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ် တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
၁၄ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မိုးမိတ်မြို့နယ်၊ ရေပုံးကျေးရွာနဲ့ မိုးလုံကျေးရွာအကြားမှာ ပလောင် (တအန်း) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA) တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၃၆၇) နဲ့ အစိုးရ စစ်တပ် တပ်မ (၇၇) လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတို့ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း TNLA ပြန်ကြားရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မန်တုံမြို့နယ်ထဲမှတဆင့် TNLA ပျောက်ကျားတပ်တွေကို လိုက်လံတိုက်ခိုက်ဖို့ ကျိုးစားတဲ့ အစိုးရ စစ်ကြောင်းနဲ့ လမ်းခုလတ်မှာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နာရီဝက်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ TNLA ဘက်က ကျဆုံး ဒဏ်ရာ မရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်က အခြေအနေကိုလည်း မသိရသေးကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။
TNLA တပ်ဖွဲ့ဟာ အစိုးရ နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်မရရှိသေးဘဲ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထဲမှာ အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ တိုက်ပွဲ အများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရာနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေလည်း မြို့ပြတွေပေါ်တက်ပြီး စစ်ဘေးခိုလှုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ သဘောထားဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကြေညာချက်မှာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို အမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ သက်ဆိုင်သူတွေကို တိုက်တွန်းကြောင်း၊ အဲ့ဒီကတဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဝါဒတွေ ရေးဆွဲဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်အတိုင်း မပျက်မကွက်ပြုလုပ်ဖို့
၁။သမ္မတ နဲ့ မီဒီယာ တွေကို ၇န်တိုက်ပေးမယ်။သည်တော့ သမ္မတ ရဲ့တတိယလှိုင်း ပြုပြင်မှုကို မီဒီယာက မထောက်ခံတော့ဖူး။ဒီတော့ သမ္မတ မအောင်မြင်နိုင်တော့ဖူး။ ဒါ့ကြောင့် ၂၀၁၅ မှာ ဦးသိန်းစိန်
မန္တလေး တံတားဦးလေဆိပ်အကြောင်း ပြောပြန်ရင် လွန်ရာကျမယ် မထင်.....
မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တံတားဦးလေဆိပ်ကို ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ပဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိုတဲ့ အသုံးအနှူံးနဲ့ တော်တော်လေး အလှမ်းဝေးနေသလို ခံစားလိုက်ရတယ်....
Immigration လဝက ကနေထွက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေကို ကတွတ်ပေါက်က ဗျိုင်းစောင့်နေတဲ့အလား ပုံပျက်ပန်းပျက်နဲ့ တာကော၊ လောပန်း အိတ်ရွေးပေးမယ် ဘာညာ စသဖြင့် မားကက်တင်းဝိုင်းပြီးဆင်းနေတဲ့ အလုပ်သမားများကို ရှောင်ရှားနေရတာက တစ်ဒုက္ခ။ လိုင်စင်ရ အလုပ်သမားတွေ လဝကကောင်တာနားအထိလာပြီး မားကက်တင်းဆင်း ဘော်ချက်တာဟာ တခြား နိုင်ငံတကာလေဆိပ် တွေမှာ မတွေ့ဘူးတဲ့ ပြည်ပခရီးသည်တချို့လဲ ထူးခြားအံ့ဖွယ် ဖြစ်လို့နေမှာပါ။
ခရီးဆောင်အိတ်က တော်တော်နဲ့ထွက်မလာတာဟာလဲ ထုံးစံလိုဖြစ်နေတဲ့ မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အတတ်ပညာဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါ။ အဲ့ဒီထက်ပိုထူးခြားတာကတော့ သူများနိုင်ငံကလေဆိပ်တွေမှာ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ လူနာတွန်းလှည်းကို တရားဝင်ငွေတောင်းခံပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကလဲ အံ့ဖွယ်တစ်ပါးပါ။
စိတ်ရှည်သီးခံမှုအပေါင်းနဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ရွေးပြီး သကာလ ဓာတ်မှန်စက်တစ်လုံးတည်းနဲ့ ခရီးသည် တစ်ရာကျော်ရဲ့ အိတ်တွေကို ဖြတ်သန်းစစ်ဆေးခြင်းဟာလဲ မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီးရဲ့ အံ့မခန်းဝန်ဆောင်မှုပင်။ တခြားနိုင်ငံကလေဆိပ်တွေမှာတော့ ရေဗူးမယူရပါဘူး။ ဒီမှာတော့ တာကော၊ လောပန်းတွေ ရေဗူးကိုယ်စီနဲ့။ သူများနိုင်ငံက စစ်ဆေးရင် ခရီးသည်ရဲ့ ဖိနပ်၊ ခါးပါတ်ချွတ်ပြီး ရှာတယ်။ ခရီးသည်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုသာ ရှေးရှုတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဒီမှာ ဘာရှာသလဲဆိုတာ တော့ မပြောတတ်။ ဒီလို လုံခြုံရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်ချင်ရင် စက် သုံးလေးလုံးထားပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့် လုပ်စေချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒိနောက် လုံခြုံရေးလဲဖြတ်ပြီးရော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆိုက်ကားဂိတ်ထဲ ရောက်သွားတဲ့အလား ကားဂိတ်တွေက ဝိုင်းဆွဲမတတ်ပါ။ ကားငှားဖို့ ဂိတ်တွေရှိနေတာပဲ၊ လိုအပ်ရင် လာငှားမှာပေါ့။ ခုလိုမျိုးမြင်ရတာ တကယ့်ကို စိတ်မချမ်းသာစရာပါ။
အဆိုးတွေထဲက အဆိုးဆုံးကိုဆက်ပြောရရင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ခရီးဆောင်အိတ်တင်တွန်းလှည်းကို ကားရပ်နားကွင်းအထိ ယူသွားလို့ရပါတယ်၊ ဒီမှာတော့ ယူလို့မရအောင်လုပ်ထားပြီး အပြင်က လိုင်စင်ရအလုပ်သမားတစ်သိုက်က ကိုက်တစ်ရာလောက် သယ်ပေးလိုက်ရင် တစ်အိတ်ကို တစ်ထောင်ပေးတာ နှာခေါင်းရှုံ့သေးတယ်။ ပြည်ပမှာ ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ကို တစ်လမ်းလုံး အေးအေးဆေးဆေး သက်သက်သာသာ သယ်လာခဲ့သမျှ မန္တလေးလေဆိပ်ရောက်မှ အညွန့်ခူးခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင် မမှားပါ။
သူများရဲ့ဝမ်းရေး ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မျိုးမှာတော့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ နိုင်ငံပါ သိက္ခာကျတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ဒီလို ပုံစံဖြစ်လာအောင် ရှယ် ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဖန်တီးထားတော့ တာဝန်ကျ Old Service အတွင်း ဝန်ထမ်းတချို့က ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်ထား သကဲ့သို့ ခရီးသည်ကြိုပို့ အဆင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှု ဈေးကွက် တစ်ခု ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာရ တော့တာပါပဲ။ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေသလဲဆိုရင် လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းပြီး လူပဲအပြင်ကို ထွက်သွားရုံပဲ။ ပြီးရင် ပေါ်တီကိုအောက်မှာ လာကြိုတဲ့ကားပေါ် တက်ပြီးဇိမ်လေးနဲ့ ထိုင်စောင့်နေလိုက်ပါ။ သူများတကာတွေလို နဖူးကချွေး ခြေမကျအောင် တန်းစီနေစရာမလိုဘူး။ ကျန်တဲ့ အိတ်တွေက အတွင်းလူရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီဖွင့်ထားသလိုမျိုး ထူးရှယ် ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ မကြာခင် ကားပေါ်ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလဲ မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဂုဏ်အင်တစ်ခုပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ဆိုက်ရောက်ခန်းမမှာ လေအေးပေးစက်မဖွင့်တာတွေ၊ အိမ်သာထဲမှာ စက္ကူမထား၊ ဖင်ဆေးရေမလာတော့ ဖင်တုန်းလုံးနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး အခန့်သားစောင့်နေတဲ့ အိမ်သာစောင့်ဆီကနေ ကျေးဇူးစကားဆိုပြီး စက္ကူတောင်းရမှာလား၊ ဝယ်ရမှာလား၊ အာကေပေးရမှာလား မသိနိုင်တာတွေ၊ ပေါ်တီကိုအောက် ကားရပ်ချင်ရင် လမ်းကြောင်းရှိတာတွေ၊ ကားအစုတ်အပြတ်တွေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပို့တာတွေ၊ Terminal တွေအလုပ်မလုပ်တာတွေ၊ အင်တာနက်ကောင်းကောင်း မပေးနိုင်လို့ Check Trough ခရီးသည်တွေကို နောက်ထပ်ခရီးစဉ်အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် မထုတ်ပေးနိုင်တာတွေ၊ စတာတွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်မှာ မှ ဒါမျိုးဝန်ဆောင်မှုကို မရနိုင်ပါဘူး။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် Necessary တွေတောင် လုပ်မပေးတာလား၊ မလုပ်တတ်တာလား၊ မသိကျိုးကျွံ လုပ်နေတာလားမသိ။ တခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ထပ်လောင်း Facility ဆိုတာ မိုင်တစ်သောင်းမက ကျန်ပါသေးတယ်။
ခရီးသည်များထံမှ လေဆိပ်အသုံးပြုခ Airport Tax ကောက်ခံထားသော်လည်း အထက်ပါ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ကြုံကြိုက်လို့ မြည်းစမ်း ခံစားချင်ကြည့်ရင် မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူပြောအများဆုံးနဲ့ အကောင်းတက အကောင်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှုပါလို့....
မှတ်ချက်- အရင်တစ်ခါတုန်းက ရေးခဲ့သလို မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကိုသွားရင် ယပ်တောင်လေး ဆောင်သွားကြပါတို့၊ အပေါ်က မျက်နှာကြက်ပြုတ်ကျမှာစိုးလို့ Saftty Hat ဆောင်းသွားပါတို့၊ ကြမ်းပြင်က ကွဲနေတဲ့ကြွေပြားတွေ ခြေထောက်ရှမှာ စိုးလို့ တွတ်ပီဖိနပ်စီးသွားပါတို့ စာရှည်မှာစိုးလို့ မရေးတော့ပါဘူး။
မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို အသုံးပြုနေရတဲ့ ခရီးသည်အပေါင်း စိတ်ပျက်ခြင်း၊ စိတ်ညစ်ခြင်း၊ စိတ်ကုန်ခြင်း အပေါင်းမှ အမြန်ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ
Zin Min Swe(FB)သတင်းစာမျက်နှာမှ
“သေချာ တာကတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရတာလောက်နဲ့ ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင် တပ်တွေ ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းပြီး တမျိုး တဖုံနဲ့ အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှုအောက် ရောက်ရှိ သွားမှာကို ကျနော်တို့ လက်မခံ နိုင်ဘူး၊ အလားတူပဲ အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေကလည်း လက်ခံ နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ကျနော်တို့ ရည်မှန်း ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပြသနာကို မဖြေရှင်း နိုင်သရွေ့နဲ့ ဖက်ဒရယ် စနစ်ကို အာမခံတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ မပေါ်မချင်းတော့ လက်နက်ကိုင်စွဲ နေရဦးမှာပဲ” ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြောရေး ဆိုခွင့်
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၆ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ဆန္ဒပြအခမ်းအနား ရုပ်သံမှတ်တမ်း(တိုကျို)
ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းကို အောက်ပါလင့်တွင် ၀ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
“မူအရ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အတိအကျထည့်ချင်တယ်။ အစိုးရက ဖက်ဒရယ်ကို အတိအကျ မထည့်ချင်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီကိုဘဲ ဖော်ပြချင်တယ်။ နောက်တခုက တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးက တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးပူးတွဲဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရေးကို အဆိုတင်သွင်းတယ်။ အစိုးရဘက်က နိုင်ငံရေး ဦးဆောင် ကော်မတီ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းရေးကို အစိုးရက အတိအကျသဘောတူကြောင်း မပြဘဲ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စာသားကိုပါ ဒီကိစ္စက
အီသီယိုးပီးယားက အမြန်လမ်းမနဲ့မြန်မာပြည်က အမြန်လမ်းမ။
(သြဂုတ် လ၊၁၀ ရက်နေ့ )
ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူညီမျှရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများတို့အတွက် နစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွတ်အသက်ပေး၊ ဘ၀ပေးခဲ့ကြတဲ့ တော်လှန်ရေး အာဇာနည်သူရဲကောင်း ရဲဘော်အပေါင်းတို့အား ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ (အာဇာနည်နေ့) မှာ လေးလေးနက်နက် ဦးညွှတ်အလေးပြုပြီး ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၆ နှစ်မြောက်နေ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်း(တိုကျို)
Post by Zay Yar.
@ ပြည်သူလူထုမှလက်မခံသော အချိုးကျကိုယ်စားပြု(PR) စနစ် ______ အလိုမရှိ..။ အလိုမရှိ..။
@ လူထုခေါင်းဆောင် နှင့် လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို _______ အကောင်အထည်ဖော်...။ အကောင်အထည်ဖော်...။
@ ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ပုဒ်မ ၄၃၆ကို ______ ပြင်ဆင်ပေး....။ ပြင်ဆင်ပေး....။
@ တိုင်းရင်းသားဒေသများနှင့်စစ်မှန်သောတွေ့ဆုံ ငြိမ်းချမ်းရေးကို _____ ချက်ချင်းလုပ်...။ ချက်ချင်းလုပ်...။
@ နိုင်ငံသားတိုင်းသမ္မတဖြစ်ခွင့်မရှိသော ပုဒ်မ၅၉(ဃ) (စ) ______ အလိုမရှိ....။ အလိုမရှိ....။ - ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓါတ်... အဓွန့်ရှည်ပါစေ။ - ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ... အောင်ရမည်
Posted by PNSjapan at 10:43 AM0comments
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ စုပေါင်း၍ တိုကျိုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၂၆)နှစ်ပြည့် ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ချီတက် ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားမှတ်တမ်းများ။
Posted by PNSjapan at 2:08 AM0comments